Galmudug waxay ku heshiisay inaanay Heshiin (Maqaal) - Caasimada Online
Home Maqaalo Galmudug waxay ku heshiisay inaanay Heshiin (Maqaal)
Galmudug waxay ku heshiisay inaanay Heshiin (Maqaal)
Xiisadda Siyaasadeed ee kasoo korortay Maamul goboleedka Galmudug bilihii lasoo dhaafay, waxay salka ku haysaa ismaan-dhaaf siyaasadeed iyo herdan ka jira maamulka curdinka ee u baahan xasillooni Siyaasadeed.
Xiisadda ka aloosan Galmudug, kama dhalan go’aankii maamulkaasi ku qaadacay Siyaasadda arrimaha dibedda dalka ay ka qaateen Xiisadda ka taagan Khaliiijka, balse waxaa jiray fashil weyn oo muddo soosocday kaasoo ahaa in Madaxweynihii Xaaf ku guuldarraystay inuu u dhaqaajiyo Galmudug waddada horumarka iyo Nabadda. Taas beddelkeeda waa isteerinka Siyaasadda Galmudug hayey koox ka hoos samaysmay mudane Xaaf oo aan waxba u uturayn , qadarin iyo kala dambaynna kula dhaqmin hayadaha iyo laamaha kala duwan ee maamulka.
Sababahaas iyo kuwo kale oo badan ayaa ku kalliftay Baarlamaanka Galmudug inay ka gaabsadaan la shaqeynta Madaxweynaha Galmudug Xaaf, iyadoo taasi jirto ayuu mudane Xaaf ku xadgudbay dastuurka Soomaaliya qodobkiisa __ kaasoo ka hadlayey in Siyaasadda arrimaha dibedda dalka ay masuul ka tahay DFS oo keliya. Wuxuu caddeeyey Mudane Xaaf in uu Imaaraatka Carabta Keligiis tegey uuna qaraab-doontay, sida uu u sheegay VOA qeybteeda Afsoomaaliga.